ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး crossword #1
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး crossword #2
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး crossword #3
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး crossword #4
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး crossword #5
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး crossword #6
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1789-91
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1792-95
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - 1788 မှဖြစ်ရပ်များ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အုပ်စုများ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - စိတ်ကူးများ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ခေါင်းဆောင်များ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဝေါဟာရများ (ငါ)
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဝေါဟာရများ (II ကို)
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဝေါဟာရများ (III ကို)
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး wordsearch - အယူအဆများ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး wordsearch - ဖြစ်ရပ်များ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး wordsearch - လူတွေ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး wordsearch - သောနေရာများ
မင်္ဂလာပါ Adblock အသုံးပြုသူ ...
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးနှင့်အတူပေါင်းသင်းနီးပါးအရာအားလုံးခဲ့ - Raven Royal, ရည်မှန်းချက်ကြီးများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, မြင့်မားသောအခွန်, ပျက်ကွက်ရိတ်, အစားအစာရှားပါးမှု, ဆာလောင်မွတ်သိပ်တောင်သူလယ်သမားများ၏, အမျက်ထွက်မြို့သားတွေက, လိင်, မုသာစကားကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှု, လူအုပ်စုအကြမ်းဖက်မှု, အစွန်းရောက်များနှင့် weirdos, ကောလာဟလနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကြံ, ပြည်နယ်-ပိတ်ဆို့အရေးယူကြောက်မက်ဘွယ်သောအ နှင့်ဦးခေါင်း-ခုတ်စက်တွေ။
ခေတ်သစ်ခေတ်မပထမဦးဆုံးတော်လှန်ရေးသော်လည်းပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကအခြားတော်လှန်ရေးချိန်ထားတဲ့ဆန့်ကျင်တိုင်းတာမှုဖြစ်လာသည်။ 18th ရာစုပြင်သစ်တွင်နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးကသောင်းကနင်းကလူသန်းပေါင်းများစွာတို့ကလေ့လာခဲ့ထားပြီး - မြင့်သောပညာရှင်များအနေဖြင့်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများကိုရန်။ အဆိုပါ အဆိုပါ Bastille ၏များကိုဝင်တိုက် ဇူလိုင်လအပေါ် 14th 1789 အနောက်တိုင်းသမိုင်း၏ defining အချိန်လေးတတော်လှန်ရေးထဲမှာလူများ၏ပြီးပြည့်စုံ motif ဖြစ်လာသည်။ တော်လှန်ရေးသမားပြင်သစ်သားတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီး - လူးဝစ် XVI, Marie Antoinette က, Marquis က de Lafayette, ဂုဏ်အသရေ Mirabeau, ဇော့ Danton, Jean-ရှင်ပေါလုကြည့်ရရင်, Maximilien Robespierre နှင့်အခြားသူများ - ကိုလေ့လာဆန်းစစ်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းပညာရှင် ဒါဟာတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်စကားတစ်ခွန်းသို့နွယ်ဖွားတစ်ဦးခုန်ခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေ, ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအကဲဖြတ်ထက်ပိုရာစုနှစ်နှစ်ခုကုန်ရပြီ။
ပထမတစ်ချက်မှာပြင်သစ်တော်လှန်ရေး၏အကြောင်းတရားများရိုးရှင်းတဲ့ပုံရသည်။ နှောင်းပိုင်း 18th ရာစုအားဖြင့်, ပြင်သစ်၏လူဦးစုစုပေါင်းညီမျှမှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်၏ရာစုနှစ်များစွာကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရတယ်။ အဆိုပါရေပန်းစားလူမှုရေးအဆင့်ဆင့်လိုအပ်သော တတိယအိမ်ရာ, ထိုနိုင်ငံ၏ Commons လည်းအခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး shouldering စဉ်က၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်။ ရှငျဘုရငျသညျမိမိ, ဗာဆိုင်းမှာကို virtual အထီးကျန်နေထိုင်ခဲ့ တော်ဝင်အစိုးရ သီအိုရီအဆံပိုင်ပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ineffectual ။ အဆိုပါအမျိုးသားရေးဘဏ္ဍာတိုက်နိုင်ငံခြားစစ်ပွဲအတွင်းမှားယွင်းမှု, စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း, အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, profligate အသုံးစရိတ်နှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ညှစ်နီးပါးဗလာဖြစ်ခဲ့သည်။
နှောင်းပိုင်း 1780s အသုံးပြုပုံရှငျဘုရငျ၏ဝန်ကြီးများအသည်းအသန်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုမကြာမီနိုင်ငံရေးနှင့်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအတွက်လှုပ်ရှားမှုသို့ morphed အဆိုပြုထားအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ်အငြင်းပွားမှုအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မှာတစ်ဦးကထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု estates-အထွေထွေ Mid-1789 အတွက်အများအပြားတော်လှန်ရေးသမားအစိုးရများ၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးအမျိုးသားညီလာခံ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်များ, ခြိမ်းခြောက်မှုများသို့မဟုတ်သွေးထွက်သံယိုမရှိဘဲအာဏာကိုတစ်ဦးငြိမ်းချမ်းသောအကူးအပြောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်ကျော်, လူကြိုက်များအကြမ်းဖက်မှုလှိုင်းလုံး - ပဲရစ်, ကျေးလက်များတွင် နှင့် ဗာဆိုင်းသူ့ဟာသူမှာ - လာမယ့် bloodier တော်လှန်ရေးမှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြား။
alpha သမိုင်းရဲ့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးက်ဘ်ဆိုက်နှောင်းပိုင်း 1700s အတွက်ပြင်သစ်တွင်ဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာဘို့အပြည့်စုံဖတ်စာအုပ်အရည်အသွေးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသေးစိတျအပါအဝင် 500 ကွဲပြားခြားနားသောမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်ထက်ပိုမိုပါဝင်ပါတယ် ခေါင်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်, စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းကဲ့သို့သောရည်ညွှန်းပစ္စည်းပါရှိသည် မြေပုံ နှင့် အယူအဆမြေပုံ, ဘာလဲဆိုတော့အချိန်, စာလုံးအဓိပ်ပါယျတစ်ဦး '' ရဲ့သူ '' နှင့်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် သမိုင်း နှင့် သမိုင်းပညာရှင်။ ကျောင်းသားများလည်းအပါအဝင်, အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသိပညာနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစမ်းသပ်နိုင်သည် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, crosswords နှင့် wordsearches.
မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, အာလဖသမိုင်းမှာအားလုံးအကြောင်းအရာအရည်အချင်းပြည့်ဆရာ, ဆရာမ, စာရေးဆရာများနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များကရေးသားထားသည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏မျှဝေသူအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များနိုင်ပါတယ် ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရ.
မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုအာလဖသမိုင်း 2018-19 ©ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းအရာကိုအာလဖသမိုင်း၏ express ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကူးယူချိသို့မဟုတ်ပြန်လည်ဝေငှပေးသည်မည်မဟုတ်ပါ။ Alpha သမိုင်းရဲ့ website နှင့်အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ရှုပါ သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ.
ဒီ site မှာရှာပါ:
ဒါဟာပြင်သစ်တော်လှန်ရေး site ကို 1781 နှင့် 1795 အကြားပြင်သစ်တွင်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်ဆောင်းပါးများ, သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အမြင်များပါရှိသည်။ ဤ site အာလဖသမိုင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 228,547 စာမျက်နှာများတွင် 353 စကားလုံးများကိုပါရှိသည်နှင့်ဇူလိုင်လ 31st 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။